Virginia Jacko Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Virginia Jacko
Kune mamaneja ewebsite kumabhizinesi mazhinji, makuru uye madiki, mwaka uno wapfuura yaive nguva yechando yekusagutsikana kwavo. Kutanga muna Zvita, akawanda emifananidzo yemifananidzo muNew York City yakatumidzwa mazita mumatare, uye maberere aive asiri ega. Mazana mazhinji emasutu akaiswa munguva pfupi yapfuura kumabhizinesi, masangano etsika, mapoka ekutsigira uye kunyangwe chiitiko che pop Beyonce, ane webhusaiti yake yakatumidzwa mukesi-yekuita sutu yakamiswa muna Ndira. Kushupika kwavakafanana? Aya mawebhusaiti anga asiri